Tag: horita brainy | Martech Zone
Tag: horita brainy
Torohevitra 10 hampiroboroboana ny tranonkala manaraka
Zoma, Desambra 20, 2013 Saturday, May 7, 2016 Jenn Lisak Golding
Tamin'ny 2013, 62% amin'ny B2B no nampiasa webinar mba hampiroboroboana ny marika misy azy ireo, izay tafakatra 42% ny taona lasa. Mazava ho azy fa mahazo laza ny webinar ary miasa toy ny fitaovana fitarihana firy izy ireo fa tsy fitaovana marketing fotsiny. Nahoana ianao no tokony hampiditra azy ireo ao amin'ny drafitry ny varotra sy ny teti-bolanao? Satria ny webinar dia miorina amin'ny endrika atiny ambony amin'ny fitarihana fitarihana mahay. Vao tsy ela akory izay, niara-niasa tamin'ny mpanjifa sy vahaolana natokana ho an'ny webinar aho, ReadyTalk, amin'ny atiny sasany ho an'ny webinar tsara indrindra